Iyo Spears & Munsil Yakakwira Tsananguro Benchmark Blu-ray Yechipiri Chinyorwa - MediaLight Bias Mwenje
musha Iyo Spears & Munsil Yakakwira Tsananguro Benchmark Blu-ray Yechipiri Edition
Iyo Spears & Munsil Yakakwira Tsananguro Benchmark Blu-ray Yechipiri Edition
Save $0.00 Save $ -29.95
Mutengo wepakutanga $29.95 - Mutengo wepakutanga $29.95
Mutengo wanhasi $29.95
Kunyangwe iwe uri wemba yemitambo novice kana nyanzvi calibrator, iwe unowana ese miedzo iwe yaunoda kuti umise uye kugadzirisa yako HDTV mu Spears uye Munsil HD Benchmark.
Shanduro yapfuura yeiyo HD Benchmark yakakurudzirwa neNew York Times, Widescreen Ongororo, Imba YeMagazini Yemagazini uye mamwe akawanda ezvinyorwa uye zvepamhepo zvinyorwa. Iyi shanduro nyowani inochengeta zvese maficha eiyo yapfuura disc uye inowedzera akawanda maficha maficha, anosanganisira:
• 3D stereoscopic calibration uye ongororo mapatani
• Audio miedzo yekumisikidza mutauri, calibration, uye A / V sync
Maitiro emafambiro ekuongorora 120Hz uye 240Hz modroduction modes
• Rumwe rubatsiro kune anotanga imba yemitambo
• Mamwe mapatani emushandisi wepamberi kana nyanzvi calibrator
Iyo Spears uye Munsil HD Benchmark chishandiso chakakura cheako calibration arsenal! Yese pateni yakasikwa ichishandisa Spears uye Munsil's yakasarudzika-yepamusoro-chaiyo software maturusi uye inomiririra mamiriro ehunyanzvi muvhidhiyo kubereka.
Ziva kuti ese mapatani e3D anoda 3D Blu-ray Disc player uye 3D terevhizheni. Iyo 2D zvinhu ichatamba mune chero Blu-ray Disc player.
5.0 Kubva pane 4 Ongororo
Sort Most Recent Mukurumbira Mukuru Lowest Rating Zvino Kubatsira
Un peu difficile à utiliser mais une fois le fonctionnent compris, c'est le top!
Benchmark disc…. Zvakanaka
Yakanaka… iri nyore kushandisa… .. nyowani TV…. Zvirongwa zvaive "zvadzimwa"… .. uchishandisa calibration disc iyi yakashandurwa isina kunaka yemhando yemhando haina kunaka. Disc yakaunzwa nekukurumidza zvakanyanya….
Yakanaka DVD uye neCustomer sevhisi
Chiitiko changu chese chakange chakatanhamara. Ini ndaive nenyaya ndikasheedza medialight. Vakaenda pamusoro nepamusoro kuti vandibatsire. Dai kuraira kubva kwavari zvakare mumoyo kurova. Chigadzirwa chikuru chinoshamisa sevatengi!
Yakakwana kusimudzira kubva kune yekare fluorescent backlight
Yakasarudzika ruzivo inotanga kupedzisa. Vhura bhokisi chibvumirano mamiriro anga akaita senge nyowani, haigone kutaura mutsauko. Mwenje yakaiswa uye yakashanda sezvakatsanangurwa pane saiti uye mumavhidhiyo. Yakasarudzika vatengi kubva kuna Jason. Mwenje yakatengwa uye calibration disc. Usatarisa kumberi.